Sawirro: Jaalayaasha cawa iyo maalin oo jahwareer ku riday kuna jeesteeyay Heegan iyo jamaahiirteeda, xilli maaney oo maaro loo waayay
Wednesday, December 19th, 2018 - 07:21:54
Tuesday January 02, 2018 - 16:46:16 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxaha Ciidanka qalabka Sida Heegan iyo Horseed ayaa shalay galab garoonka Wiish ku yeeshay kulanki u dambeeyay wareega hore ee horyaalka kubadda Gacanta 2017-18.
Kulankan oo labada koox u ahaa kulanki 5-aad oo ay ciyaaraan ayeey garoonka soo galeen iyagoo leh min 12 dhibcood, waxayna koox waliba dooneysay in ay wareega hore hogaanka ku nasato.
Heegan ayaa bilowga hore garoonak lasoo gashay waxaynna hogaanka ku qabatay goolal uu u dhaliyey Cali Barwaawiini oo ah laacib shabaqa saaxiib a=la ah, waxaase Horseed in ay kasoo kabato ka caawiyey laacibka da’da yare e sanadkan bandhigiisa wacan uu Horseed ka caawiyey in ay hogaamiyaasha Noqdaan, Xuseen Maxamuud Dhuxuloow, Xuseen Basbaas.
Labada koox ayaa hogaankooda aad isugu dhawa ila lagaaro qeybaha ugu dabeeya ciyaarta waxaana fursad qaali ah iska lumisay Heegan oo inta abdan hogaanka qabaneysay waloow lasoo barbareynayay inta abdan waxaana gebogabadii looga adkaatay 26-27.
Goolhayaha Naadiga ciidanka xooga soomaaliyeed ee Horseed C/raxmaan Maxamed Cabdulle Maaney aya door muhiim ah ka ciyaaray in kooxdiisa Horseeday ay gaarto guul ay mudo dheer ku hamin jireen kadib markii uu Heegan ka badbaadiyey fursado badan oo ay goolal ku dhalin kareen.
Horseed ayaa sidaa ku noqotay hogaamiyaasha Horyaalka wareegiisa hore waxayna leedahay 15 dhibcdoo taasoo ka dhigan in ay wada guuleysatay 5 kulan ee ay horyaalka ka ciyaartay.
Waxaana kusoo xiga Heegan 00 12 dhibcood leh, halka Dekedda oo horyaalka daafacaneysa ay leedahay 9 dhibcood.